नाम यस्ता अक्षरबाट सुरु हुने मानिस हुन्छन् विलक्षण, जान्नुहोस् किन ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/नाम यस्ता अक्षरबाट सुरु हुने मानिस हुन्छन् विलक्षण, जान्नुहोस् किन ?
काठमाडौं । यो भनिन्छ कि एक व्यक्तिको नाम को पहिलो अक्षरका आधारमा उसको प्रकृति र व्यक्तित्वबारे जान्न सकिन्छ । यसमा रहेका केही अक्षरहरू प्रभावशाली मानिन्छन् । ए, जे, ओ र एसजस्ता संख्याशास्त्रको आधारमा एक अक्षर १ को बराबर मानिन्छ । ति मानिस जसको नाम एस अक्षरबाट सुरू हुन्छ, तिनीहरु प्राकृतिक रुपमा नेताहरू हुन् ।
यो भनिन्छ कि एस नामबाट सुरु भएको व्यक्तिले जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दछ । भनिन्छ कि एस अक्षरबाट सुरु भएको नामवाला व्यक्तिहरु धेरै वफादार मानिन्छन् ।
तिनीहरू केवल रोमान्टिक मात्र होइन प्रकृतिप्रेमी पनि हुन्छन् । तिनीहरूको हृदयमा जे हुन्छ, त्यो कुरा उनीहरुको जिब्रोमा पनि आउँने गर्दछ । यो भनिन्छ कि तिनीहरू कृत्रिम हुँदैनन् । यो भनिएको छ कि उनीहरू आफ्नो प्रेमको ब्यवहार गरेर इशारा गरेर र महँगो उपहार दिन्छन् ।
एस अक्षरबाट नाम सुरु भएका व्यक्तिहरु धेरै मिलनसार पनि हुन्छन् । तिनीहरू सुख र दुःखमा सबैलाई समान समर्थन दिन्छन् । एसबाट नाम सुरु भएका व्यक्तिको लागि आफ्ना भावनाहरू वर्णन गर्न यो धेरै गाह्रो हुन्छ । ऊ आफ्ना भावनाहरुलाई दिमागमा राख्न चाहन्छ । धेरै चोटि यी व्यक्तिहरू कुनै कारण बिना नै निराशाको सिकार हुन्छन् । तिनीहरू धेरै उदार हुन्छन् ।
तिनीहरू इमानदार र वफादार पनि हुन्छन् । साथीहरूको साथ पनि छोड्दैनन् । यो भनिन्छ कि एस अक्षरबाट नाम आउँने मानिसहरु अरुको लागी आफु भन्दा बढी सोच्दछन् र विश्वास गर्दछन् । एसबाट नाम सुरु हुने व्यक्ति पैसा र जीवन मा प्रगति गर्न सफल हुन्छन् । तिनीहरूलाई जीवनमा पैसाको महत्त्व थाहा हुन्छ र त्यसैले तिनीहरू सफल व्यापारी, राजनीतिज्ञ हुन्छन् ।
अन्त्यमा, यस लेखमा दिइएका जानकारीमा, हामी दावी गर्दैनौं कि यी पूर्ण रूपमा सत्य र सही छन् । तिनीहरूलाई अवलम्बन गर्नु अघि, कृपया सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
रश्मीको बोल्ड जलपरी पोज [फोटो फिचर]
पुरुषलाई महिलाका यी ७ अंगले भुतुक्कै पार्छ !